Eebjuun bebbeekamoon hiika maal qabu laata? - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Eebjuun bebbeekamoon hiika maal qabu laata?
Yeroo ijoollumaa, gaafa xixiqoo sanii, eegallee eebjuu keessa fiigna, dheessina. Yeroo tokko tokko maallaqa guurra, lafa irraa hammaarra. Qilee irraas utaalla ykn itti kufna. Yeroon boonnus, dhibamnus jira. Garuu, eebjuun namoonni heddu osoo hinargine hinafne kunniin hiika maalii qabu laata? Qorattoonni qorasaamuu waa’ee hiikaa eebjuu yeroo heddu nama dhipphisanii kana akka asii gadiitti hiika itti latu.
Hallayyaa ykn gamoo dheeraa irraa kufuu
Odutti namni qilee ykn waan olfagaatu irraa kufee lafa dhahe nidu’a jedhameeti kan amanamu. Suni sirrii miti, garuu.
Hiikaan eebjuu kanaa: jireenya keessatti cinqaan liqimfamuufi deeggarsa sibarbaachisu dhabuu kee agrasiisa. Yeroon eebjuu kana namni tokko itti argu yeroo jireenyi itti hadhaaye, ba’aan itti ulfaateedha. Dhaabadhuu rakkoo kee barbaadadhu.
Qullaa ummata keessatti mudhachuu
Eebjuu keessa yeroo qullaa ykn woyaa gaarii hintaane uffattee itti mul’atte jiraa? Ee taanaan deebiin kee.
Hiikaan eebjuu kanaa: sammuun yaada nisaaxilama, ykn iccitiin koo ifatti baha jedhuun qabamuu isaa agarsiisa.
Ilkaan dhabuu ykn ilkaan nama irraa harca’uu
Ilkaan dhabuun ykn ilkaan namas shamuun eebjuu namni heddu irra deddeebi’ee argu keessa isa tokko.
Hikaan isaa: sammuu kee yaada hinbareedu tarii fokkina qaba jedhuun cinqitee jirta. Eebjuun kuni qaanii sodaachuu kees agarsiisa. Eebjuu kana irraa boqonnaa argachuuf barechee si uumuu isaa uf amansiisi.
Eebjuun ari’amuun, dheessanii bahuu dadhabuun wan gadhee hedduu namaa jeequ keessaa isa birooti. Namni eebjuu keessa hinfiigne, hafuurri itti hingabaabbanne heddu jira hinfakkaatu.
Hikaan isaa: wonti ykn namni tokko sisodaachisaa jiraachuu agarsiisa. Rakkoo qabdu gamaaggami.
Dhukkubsachuu ykn du’uu
Eebjuun firri kee dhibamee ykn du’ee boottee hinbeektuu? Ummanni keenna eebjuu tanaaf hiika addaa itti laatu. Worri qorasammuu irratti bobba’an waanbiraa jedhuun.
Hiika isaa: keessi kee dhiphachuu ykn yaada gara boodaatti rakkachuun koo hinhafu jedhuun sammuu qabamuu isaa addeessa. Hamtuun dhufutu akka hinjirre ufamansiisii sammuu kee hidhaa keessaa baasi.
Aabjuun kuni yeroo heddu namoota yeroodheeraadhaaf mana barnootaa irraa fagatan biratti ni heddummaata.
Hikaan: jireenya keessatti qormaanni heddu sitti jirachuu mul’isa.
Konkolaataan ykn xayyaarri sidarbuu
Eebjuu keessa konkolaataa hinariinee,yeroo isin bira geettanitti isn jalaa hinkaanee? Ee.
Hiikaan isaa: yaada jireenya keessatti hireen gaariin nadabreera jedhu qabaachuu mul’isa. Maal ta’ina lata hireen sidabre kuni kan akkana sidhiphisu?
eebjuu irra deddeebinee argine
Previous articleArsenaal tapha FA Cup isa marsaa itti aanutti dabre. Cheelsiifi Manchastar Siitiin dorgommiin ala ta’an
Next articleODF biyyatti galuuf qophii xumuradhe jedha